रात को १२ बजे पनि भाउजूले बोलाएर मस्किदै भन्थिन् बाबु धेरै बेर खेलाउनु । मलाई मज्जा आउछ । -
Home मनोरन्जन रात को १२ बजे पनि भाउजूले बोलाएर मस्किदै भन्थिन् बाबु धेरै बेर...
रात को १२ बजे पनि भाउजूले बोलाएर मस्किदै भन्थिन् बाबु धेरै बेर खेलाउनु । मलाई मज्जा आउछ ।
भाउजू भाडा धुदै रहेछिन म आएको देखेर भाडा माझ्न छोडेर म तिर आईन अनि मलाई आफ्नू सुत्नेकोठामा लगेर कपडा खोल्न लगाईन र म पनि त्यही चाहन्थे । छिट्टो छिट्टो सबै कपडा खोले उफ।मेरो त एकदम ठाडो भएको रहेछ । भाउजूले टि.भि. खोलिन अनि सिरानी मुनि देखी एउटा क्यासेट निकालेर डि भि डिमा हालिन ।
फिल्म सुरु भयो चुस्ने र चाट्ने फिल्म रहेछ । ‘भाउजू छिटो छिटो कपडा खोलेर मेरो मुखमा चुस्न थालिन ‘उफ्फ मलाई खपी नसक्नु भयो मैले पनि भाउजूलाई बेडमा पल्टाएर भाउजूको खुब चाट्न थाले । भाउजू यत्ति जोड जोडले कराउन थालिन कि बहिर कसैले सुन्ने डरले मैले भाउजूको मुख नै थुनिदिए ।
भाउजूले भन्दै थिइन बाबु छिट्टो छिट्टो छिट्टो छिट्टो २५ मिनेट हाम्रो घमासन युद्ध नै चल्यो अन्त्यमा म स्खलित भए भाउजू पनि आँखा चिम्म गरेर निकै आनन्द मान्दै थिइन । अनि एक चोटि मायाले भाउजूले फेरी चुमि दीईन । म फेरी अर्कै संसारमा हराउन पुगे ।मैले दू/ध समात्दा वाहा त सी.. सी … आ …आ… गर्न थाल्नु भयो । त्यस राति त्यतिकै मा आब सुत भन्नु भयो र आफू पनि खाट मा जानु भयो ।
भोलि बेलुका देखि त मिस ले आमा सँग भनेर वाहाको कोठामा नै पढेपछि सुत्न स्वीकृति लिनुभयो । १२ वर्षको केटो कसैले शङ्का गर्ने पनि भएन । त्यहीमाथि गाउँ घरमा ती कुरा हरू सामान्यनै हुन्थ्यो । सहरको जस्तो आइमाई सँग कोठामा सुतदामा ……भन्न पनि थिएन । भोलि पल्ट बाट त मिसले मलाई खाटमा सँगै सुतौन थाल्नु भयो ।
वाह दू’ध चु’स्न लगाएर पल्टिनु भयो म पनि वहाको … चुस्न थाले । वहाले एक हातले दू.ध समात्न भन्नु भयो मैले त्यो पनि गरे । मिस त सी.. सी.. सी.. सी.. गर्न थाल्नु भयो र उठ्नु भयो र मेरो भर्खरै छाला फर्काएको …. चलाउन थाल्नु भयो । …को छाला तल माथि गरेर ..न थाले पछि त मलाई भित्रै काउकुती लाग्न थाल्यो र एकछिन पछि त जिउ सिरिङ्ग हुने गरी से.तो पदार्थ निस्क्यो । म त झसङ्ग भए तर त्यो नै रहेछ जिन्दगी को पहिलो … । त्यो पनि मिस को हात बाट । अब भोलिपल्ट देखि त मेरो दैनिक रुटिन राति भएपछी मिसको .. समातेर सुम्सुम्याउने, मिस ले ला… चलाएर छोल्दिने हुन थाल्यो । यसरि ..मलाइपनि रमाइलो लाग्न थाल्यो ।
प्रत्येक राति मिसले मलाइ २/३ पटक ..लिदिनु हुन्थ्यो । तर .. भने लगाउनु भएन । … झरन थालेपछी त केटाहरुको स्वर पनि धोद्रो हुदो रहेछ । मैले आफूलाई निकै परिवर्तन भएको महसुस गर्न थालेँ । अब त …पनि निकै ठुलो हुन थाल्यो आफै पनि …गर्न थाल्ये । यसरि ८/१० दिन बितेपछी एक राति मिसले मेरो सबै कपडा खोलेर नांगै बनाउनु भयो र आफू पनि नांगै हुनुभयो । लालटिनको उज्यालोमा २३/२४ वर्षको मिसको शरीर त साच्चै लोभ लाग्दो थियो । त्यो सम्झदा आज पनि म रोमान्चित हुन्छु । एकदम राम्रो मिलेको शरीर, गुलाबी मुन्टा भएका ठिक्कको … र भु..त्ला त्यति धेरै नआको …को गुलाबी फाँकाहरू क्या राम्रा देखिएका …. ।
लालटिनको मधुरो उज्यालोमा दुवै जना नांगै भएपछी मिसले मेरो … त मुखमा पो हालेर चुस्न थाल्नु भयो । मैले … मुखमा हालेर चुस्ने भन्ने त सोचेको पनि थिइन । तर पनि .. चुस्दा त एक प्रकारको आनन्द पो हुन थाल्यो । मिसले मुखमा हालेर .. चुस्दा त मेरो जिउनै सिरिङ्ग हुन थाल्यो र भित्र भित्र आनन्द आउन थाल्यो । मिसले जति जति चुस्नुहुन्थ्यो त्यतीनै मेरो उत्तेजना बढ्दै थियो । यसरी म मिसको माथि चढेर ..मा. घुसार्न खोज्दै थिए त्यतिनै बेला मिसले एक हातले मेरो …. समातेर आफ्नो …तिर सोझ्याउनु भयो भने अर्को हातले …. च्यात्न थाल्नु भयो र मलाइ ..मा ..ड़ो घुसार्न भन्नु भयो ।
मैले ..को मुखमा … लगेर घुसार्न खोजेको त .. एकदम चिप्लो जस्तो लाग्यो । सायद मिसले … बाट निकै पानी फ्याक्नु भएको थियो । …मा मेरो तातिएको … पसाउन खोजें पहिला पस्दै पसेन । … एकदम चिप्लो भएपनि ..पस्न भने निकै गाह्रो भै रहेको थियो । म पनि पहिलो पटक … लागेको केही थाहा थिएन त्यसैले जोड गरेर छिराउन पनि सकिन । त्यतिकैमा मिसले मलाइ बेस्सरी आफ्नो खुट्टाले कसेर समाउनु भएर हातको अन्गालोले बाध्नु भयो । त्यतिनै बेला मिसको रसिलो पु… भित्र मेरो …. ल्वाम्म छिर्यो । अहिलेको मेरो अनुभवमा मिस पनि त्यति खेर …को अनुभबी हुनुहुन्थेन जस्तो लाग्छ ।
सायद वहाले त्यो भन्दा पहिले ..केको पनि हुन सक्छ । मिसले मलाइ खुट्टा र हातले अँगालोमा च्याप्प कसी राख्नु भयो र मिस पागल जस्तै भएर घरी मेरो गाला घरी मेरो ओठ घरी गर्दन चुमी रहनु भएको थियो । मैले पनि अनायासमै आफ्नो ओठ मिसको मुखमा जोडेर ओठ चुस्न थालेँ । मिसको छातीका … पनि माड्दै थिएँ । अब त मलाइ पुरा मजा आइरहको थियो । उत्तेजना झन झन बढ्दै थियो। बेलाबेलामा मिसको मुखबाट “गूँङ,,,,गुङ” निस्कदै थियो । मिस अरू पनि केही बर्बराएको जस्तो गर्नुहुदै थियो तर मेरो मुख मिस को मुखैमा जोडिएको र जीब्रो चुसिरहेकोले आवाज आइरहेको थिएन । १० मिनेट मच्चिएपछि मेरो … स्खलित भयो।
….झरेपछि भने म सिथिल भएर मिसको अँगालोबाट उम्कन खोज्दै थिए । तर पनि केही बेर सम्म मिसले मलाइ आफ्नो अँगालोमा कसेर राखी रहनु भयो । एकछिन पछि मिसको कसाई खुकुलो हुँदै गयो र म मिसको अँगालो बाट मुक्त भए । जीवनको पहिलो … खासै विशेष तरिकाले नभैकन यसरि नै सकियो । सायद सबैको पहिलो …इको अनुभव यस्तै हुन्छ होला ।
त्यो राति जम्मा ४ पटक र प्रत्येक पटक को ….बिल्कुलै भिन्दै भिन्दै अनुभव भयो । भोलि पल्ट देखि त म प्रत्येक दिन रातीको प्रतिछ्यामा बस्न थाले । केही रातको …. पछि त म पनि अनुभबी …. केटो हुन थाले । प्रत्येक राति पहिला मिसले मेरो ….चुस्नु हुन्थ्यो र त्यस पछि …. थाल्थ्यौ । …। कहिले उभ्याएर, कहिले कोल्ट्याएर, कहिले कुकुरको पोजिसनमा …फरक फरक पोजिसनमा …Garna थालियो । तर मिसले … चाट्न अहिले सम्म भन्नु भएन । वहाले …. भने सधैँ चुस्नु हुन्थ्यो । हाम्रो … पनि निरन्तर हुँदै थियो र कसैलाई पनि यो बारेमा शङ्का थिएन । म पनि एकदम …. हुन थाले । … पनि ७ इन्च साइजको र एकदम दरो (दाउरा जस्तो) हुन थाल्यो । एक रात …. नपाउदा पनि के नपुगे, के नपुगे जस्तो हुन थाल्यो ।